3. Adhipati Paccaya | Dhamma Training Center
Jul 22 nd, 2020
ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၃-အဓိပတိပစ္စယော Adhipati paccayo (Predominance condition)PDF File
ပဋ္ဌာန်းတရားတော်နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ နေ့စဉ်ဘ၀ Daily Life Patthana ၃-အဓိပတိပစ္စယော Adhipati paccayo (Predominance condition) ...
၃- အဓိပတိပစ္စယော Adhipatipaccayo (Predominance condition) PDF
၃- အဓိပတိပစ္စယော Adhipatipaccayo (Predominance condition) PDF ၃- အဓိပတိပစ္စယော Adhipatipaccayo (Predominance condition) PDF...
Mar 11 th, 2020
၃။ အဓိပတိပစ္စယော Adhipati Paccayo (Predominance condition) (1 of 9)
၁ – ကုသလတ္တိက ၇ – ပဥှာဝါရ ၁ – ပစ္စယာနုလောမ ၁ – ၀ိဘင်္ဂ၀ါရ ၃။ အဓိပတိပစ္စယော Adhipatipaccayo (Predominance condition) Adhipatipaccayo Paccayaniddeso 3. Adhipatipaccayoti –...
၃။ အဓိပတိပစ္စယော Adhipati Paccayo (Predominance condition) (2 of 9)
Predominance condition – Adhipati Paccayo Adhipati means predominance. There are two kinds of Adhipati. Ārammanh ‘ādhipati and Sahajāt ādhipati’ . ‘Ārammanh’ ādhipati ...
Adhipati paccayo Pańhāvāro Kusalo dhammo kusalassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Ārammaṇā- dhipati, sahajātādhipati. Ārammaṇādhipati – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposatha- kammaṃ katvā, taṃ garuṃ...
၃-အဓိပတိပစ္စယော ပဥှာဝါရပါဠိ ၄၁၃။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ အဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။ အာရမ္မဏာဓိပတိ၊ သဟဇာတာဓိပတိ။ အာရမ္မဏာဓိပတိ ဒါနံ ဒတွာ သီလံ သမာဒိယိတွာ ဥပေါသထကမ္မံ ကတွာ တံ ဂရုံ ကတွာ ပစ္စဝေက္ခတိ၊ ပုဗ္ဗေ...
၃။ အဓိပတိပစ္စယော Adhipati Paccayo (Predominance condition) (5 of 9)
၃-အဓိပတိပစ္စယော ပဥှာဝါရပါဠိနှင့် မြန်မာ zawgyi ၄၁၃။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ အဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ကု-၁) ကုသိုလ်တရားသည် ကုသိုလ်တရားအား အဓိပတိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။ အာရမ္မဏာဓိပတိ၊ သဟဇာတာဓိပတိ။ ၁။ အဓိပတိပစ္စည်းသည် အာရုံအားဖြင့်လွန်ကဲစွာ...
၃။ အဓိပတိပစ္စယော Adhipati Paccayo (Predominance condition) (6 of 9)
၃။ အဓိပတိပစ္စယော zawgyi ဘ၀နှင့် ပဋ္ဌာန်းသင်ခန်းစာ အဓိပတိမှာ အကြီးအမှူးဟု အဓိပ္ပါယ်ရပြီး၊ ဣန္ဒြိယမှာ အစိုးရသည်ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသဖြင့် အဓိပတိပစ္စည်းနှင့် ဣန္ဒြိယပစ္စည်းနှစ်ပါးတို့ အနက်ဓိပ္ပါယ် တူသယောင်ယောင် ထင်ရသော်လည်း အဓိပ္ပါယ်မတူညီပါ။ ဥပမာဖြင့် ပြဆို ရလျှင် ထီးပြိုင် နန်းပြိုင်မင်းများ၏...
အဿာဒေတိနှင့် အဘိနန္ဒတိ zawgyi အာရုံခြောက်ပါးက စားကျက်ဟုပမာပြုမည်ဆိုလျှင် စားကျက်၌ ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်ဟူ၍ မရှိကောင်းပေ။ နာမ်တရားဖြစ်သည့် ကုသလဟေတုနှင့် အကုသလဟေတုကသာ ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ်ဟူ၍ ရှိသည်။ ထို့ကြောင့်အလောဘ၊ အဒေါသ၊ အမောဟဟူသော ကုသလဟေတု အားကောင်းပါက ဒါန...
၃။ အဓိပတိပစ္စယော Adhipati Paccayo (Predominance condition) (8 of 9)
ဘုရားရှင်၏ဉာဏ်တော်အထူး သူတစ်ပါးနှင့် မဆက်ဆံသော ဘုရားရှင်၏ ဉာဏ်တော်အထူးတို့ကိုလည်း အလျဉ်းသင့်နေသဖြင့် ဖော်ပြ ပေးလိုက်ပါသည် – ၁။ သတ္တ၀ါတို့ ဣနြေ္ဒရင့် မရင့်ကိုသိသော ဣန္ဒြိယ ပရောပရိယတ္တိဉာဏ်၊ ၂။ သတ္တ၀ါတို့ အလိုဆန္ဒ အာသယနှင့် ထိုသတ္တ၀ါတို့...
ဘုရားအလောင်းတော် ဇနကမင်းသား၏ အဓိပတိထိုက်သည့် လုံ့လ၀ီရိယ zawgyi မဟာဇနကဇာတ်တော်၌ ဘုရားအလောင်းတော် ဇနကမင်းသား၏ ခမည်းတော်ကို ဘထွေးတော်က စစ်ပွဲဆင်နွဲပြီး မိထိလာပြည်ကို အရယူသွားတော့သည်။ ဘုရားအလောင်းတော် ကိုယ်ဝန်လွယ်ထားသည့် မိဖုရားခေါင်ကြီးသည် ကိုယ်လွတ် ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ခဲ့သည်။ သားကလေး ဖွားမြင်လာသောအခါ မင်းသား ငယ်၏...
Dec 23 rd, 2019
၃- အဓိပတိပစ္စယော PDF file – Adhipatipaccayo (Predominance condition)
၃- အဓိပတိပစ္စယော PDF – Adhipatipaccayo (Predominance condition)...
Oct 27 th, 2019
အဓိပတိပစ္စယော ( ပါဠိတော် ) zawgyi ၄၁၃။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ အဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။ အာရမ္မဏာဓိပတိ၊ သဟဇာတာဓိပတိ။ အာရမ္မဏာဓိပတိ — ဒါနံ ဒတွာ သီလံ သမာဒိယိတွာ ဥပေါသထကမ္မံ ကတွာ၊ တံ ဂရုံ...
Adhipati paccayo ( ROMAN ) Kusalo dhammo kusalassa dhammassa adhipatipaccayena paccayo. Ārammaṇādhipati, sahajātādhipati. Ārammaṇādhipati – dānaṃ datvā sīlaṃ samādiyitvā uposathakammaṃ katvā, taṃ garuṃ katvā...
Oct 25 th, 2019
၃-အဓိပတိပစ္စယော (zawgyi) ကုသိုလ်တရားသည် ကုသိုလ်တရားအား ၄၁၃။ ကုသလော ဓမ္မော ကုသလဿ ဓမ္မဿ အဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (ကု၊ ကု-၁) ကုသိုလ်တရားသည် ကုသိုလ်တရားအား အဓိပတိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။ အာရမ္မဏာဓိပတိ၊ သဟဇာတာဓိပတိ ၁။ အဓိပတိပစ္စည်းသည် အာရုံအားဖြင့်လွန်ကဲသော အစိုးရခြင်းဟူသော...
2 – အဓိပတိပစ္စယော ( Adhipati paccaya )ဘုရားလောင်းရွှေဥဒေါင်းမင်း ညွှတ်ကင်းမိ file (2of6)
2. အဓိပတိပစ္စယော ( Adhipati paccaya ) file (2of5) (zawgyi) ကုသလော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ ကုသလော ဓမ္မော အဗျာကတဿ ဓမ္မဿ အဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။...
၃- အဓိပတိပစ္စယော ( Adhipati paccaya )အရှင်အာနန္ဒာနှင့် အရှင်ဒေ၀ဒတ်တို့၏ တောင်းဆုများ file (3of6)
အရှင်အာနန္ဒာနှင့် အရှင်ဒေ၀ဒတ်တို့၏ ဓာတ်ခံအားလျှော်သည့် တောင်းဆုများ file (3of5) zawgyi အကုသလော ဓမ္မော အကုသလဿ ဓမ္မဿ အဓိပတိပစ္စယေန ပစ္စယော။ (အကု၊ အကု-၁) အကုသိုလ်တရားသည် အကုသိုလ်တရားအား အဓိပတိပစ္စယသတ္တိဖြင့် ကျေးဇူးပြု၏။...
၄- အဓိပတိပစ္စယော ( Adhipati paccaya ) သဟဇာတာဓိပတိ-၁ file (4of6)
၄- အဓိပတိပစ္စယော ( Adhipati paccaya ) သဟဇာတာဓိပတိ-၁ file (4of5) zawgyi သဟဇာတာဓိပတိ အာရုံအားဖြင့် လွန်ကဲစွာ အစိုးရသည့် သဟဇာတာဓိပတိပစ္စည်းဖြင့် ကျေးဇူးပြုခြင်းဟူသည် – အကုသလော ဓမ္မော အဗျာကတဿ...
သဟဇာတာဓိပတိ-၂ file (5of6) zawgyi (င-၁) ၀ီရိယနှင့် ဆန္ဒသည် ကုသိုလ်၊ အကုသိုလ် မဟုတ်ပါ၊ ကုသိုလ်နှင့်ပေါင်းပါက ကုသိုလ်သတ္တိတိုးပြီး အကုသိုလ်နှင့် ပေါင်းမိပါက အကုသိုလ်တန်ခိုးတိုး၏။ (င-၂) ဟေတုပစ္စည်း၌ လောဘပါပြီး၊ အဓိပတိပစ္စည်း၌မူ...
၆- အဓိပတိပစ္စယော ( Adhipati paccaya ) သဟဇာတာဓိပတိ-၃ file (6of6)
သဟဇာတာဓိပတိ-၃ file (6of 6) zawgyi (စ-၁) ဆန္ဒ၊ ၀ီရိယ၊ စိတ္တ၊ ၀ီမံသ လေးပါးလုံး တပြိုင်တည်း အဓိပတိမရပါ။ အကြောင်းမှာ အဓိပတိဟူသည် ရှင်ဘုရင်ဖြစ်သဖြင့် ပြိုင်ဘက်ကင်း၏။ ထို့ကြောင့် ဆန္ဒကအဓိပတိဖြစ်ပါက ကျန်သူတို့ နောက်လိုက်ဖြစ်ပြီး ဆန္ဒခိုင်းသမျှကို...